Pages: « 1234567 8910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 | Go Down
Author Topic: အမောပြေဟာသမှတ်စု (Read 499755 times)
« Reply #990 on: March 09, 2013, 09:20:13 PM »
ယောင်္ကျား။ ။ “ငါသေသွားလို့ကတော့ မင်းငါ့လို့ ယောက်ကျားမျိုး ဒီတစ်သက်
ထပ်ရှာတွေ့ မှာမဟုတ်ဘူး ဘာမှတ်လဲ....”
မိန်းမ။ ။“ကျွန်မကလည်း ဒီတစ်သက် ရှင့်လိုယောင်္ကျားမျိုး ထပ်ရှာမယ် ထင်နေလို့လား... ဘာမှတ်လဲ”
« Reply #991 on: March 10, 2013, 06:09:55 PM »
လစဉ် လခထုတ်ရက်တွင် အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတစ်ယောက်သည် ခါတိုင်းရနေကျ လစာ ထက် ပို၍ ရရှိရာ မသိချင်ယောကင်ဆောင်ပိး ထုတ်ယူသွားလေ၏။
နောက်တစ်လ လစာ ထုတ်ရက်တွင်ရနေကျ လစာ ထက်လျော့နဲနေ၍ အထက်လူကြီးထံသွား၍ လစာအပြည့်မရကြောင်း လစာမှားနေကြောင်း တိုင်လေ၏။
ထိုအခါ အုပ်ချုပ်သူအထက်လူကြီး မှ .......
" နေစမ်းပါအုန်း ကွယ်။ခုကျတော့မှ မင်းက ဒီလိုပြောရသလားကွ။ မင်း အရင်ပြီးခဲ့တဲ့လ ... လခ ထုတ်တုန်းက ပိုရတော့ ဘာမှမပြောပါလား။.."
ထိုအခါ ၀န်ထမ်းအမျိုးသမီးမှ ခပ်အေးအေးပင်ပြန်ဖြေ လိုက်ပုံမှာ.....
" .အမှားဆိုတာ တခါတလေတော့ဘယ်မြင်ပါ့မလဲ ဆရာရယ်။အခု ဒီလမှာပါ ကျမရသင့်တဲ့လစာအမှန်မဟုတ်ပဲ လျော့နေတာကျတော့
နှစ်ခါ မှားတာမဟုတ်ဖူးလား....ဒီတော့ နှစ်ခါဆိုရင်တော့ကျမတွေ့တာပေါ့ ..."...တဲ့
« Reply #992 on: March 10, 2013, 06:13:16 PM »
အနုတ် ၁၀၀၀ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ် အထိ အအေးဓါတ်ပေးနိုင်သော ရေခဲသေတ္တာ တမျိုးကို ဂျပန်တို့က တီထွင်လိုက်ကြသည်။
ဤ ရေခဲသေတ္တာ အထဲတွင် အကြာဆုံးနေနိုင်သူအား တိုရှီဘာ ကုပ္မဏီ ကို အလကားပေးမယ်ဟု ကြောငြာလိုက်၏။
အမျိုးသမီးတဦးနဲ့ အရက် တစ်သေတ္တာ ပေးရန်လည်းတောင်းဆို၏။ဂျပန်တို့ ကလည်းခွင့်ပြု၍ ပြင်သစ်လဲဝင်ထိုင်လိုက်၏။
အနုတ် ၂၀၀ ဒီဂရီတွင် တစ်မိနစ်မျှအောင် ပင် မထိုင်နိုင်ပဲပြန်ထွက်လာ၏။
နောက် ရှရုားလူမျိုးမှ လည်း ဗော်လ်ကာ အရက် နှင့်သိုး.ကင်တခု ယူဆောင်ကာ ၀င်ထိုင်လိုက်၏။
အနုတ်ဒီဂရီ ၃၀၀ ခန့်တွင် ရှရုားလူမျိုးလည်း မခံနိုင်တော့ပဲ ချက်ချင်းဆိုသလို အော်ဟစ်ပီး ထွက်လာပြန်၏။
တိုအခါ မြန်မာ ကိုယ်စားလှယ်မှ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးမှရောင်းချပေးသောအင်တာနက်ဖုန်းတလုံးနှင့်လက်တော့ တစ်လုံးကိုကိုင်ကာ မိမိ ၀င်ထိုင်မည်ဟုပြော၏။
ဂျပန်တို့က လည်း အရက်ကောယူဦးမလားဟုမေး၏။
အအေးဓါတ်ကို အနုတ် ၁၀၀၀ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ် အထိနှိမ့်ချလိုက်သည်။
၁-နာရီကြာသွား၏။မြန်မာကားထွက်မလာ။သို့နှင့် ဂျပန်အချင်း၂ ပြောကြ၏။
" ဒီမြန်မာတော့ ရေခဲပီး သေနေလောက်ပီ ထင်တယ်။တံခါးဖွင့်ပီး သူ့ကို ထုတ်ကြရအောင်ဟေ့..." ..လို့ဆိုပီးဂျပန်တယောက်မှတံခါးကို ဖွင့်လိုက်လေ၏။
ထိုအခါ ချွှေးတလုံး၂ ဖြင့် ရေခဲသေတ္တာ အတွင်းမှ ထွက်လာသောမြန်မာက ဂျပန်၏ ခေါင်းကို တယ်လီဖုန်းဖြင့်ထုလိုက်၏။
" အင်တာနက်လိုင်းမမိလို့ ချွှေးပြန်နေရတဲ့ကြားထဲ ဒီကောင်က တံခါးကို လာဖွင့်နေရသေးတယ်။အလိုက်ကန်းဆိုးလုံးဝ မသိတဲ့ အကောင်တဲ့..."
« Reply #993 on: March 14, 2013, 07:33:55 AM »
ကျနော့် ရပ်ကွက်ထဲတွင် အဖေတခု သားတခု မိသားစု တခု ရှိ၏။
ခက်တာက အဖေ လုပ်သူက အေးဆေးသလောက် သားဖြစ်သူက မိုးလင်းမှ မိုးချုပ် သောက်သည့် ဇိုးသမားဖြစ်သည်။
အဖေ လုပ်သူလည်း အမိမဲ့ မို့ သနားကာ မသိချင်ယောင် ဆောင်ပါသော်လည်း သားဖြစ်သူမှာ ပို ပို သာသောက်လာ၏။
သို့နှင့် နောက်ဆုံး မိဘမေတ္တာ ခံစားချက်ဖြင့်....ဆုံးမရန်စဉ်းစား၏။
ရိုက်နှက်ဆုံးမ ရမည့် အရွယ်လဲမဟုတ်၍ အနုနည်းသုံး၍ ဖြောင်းဖြ အရက်ဖြတ်ရန် စဉ်းစားလေ၏။
တစ်ခုသောမနက်ခင်းတွင် သားဖြစ်သူ အိပ်ယာမှနိုးလာခိုက် အရက်ဆိုင်မသွားမီ ဖခင်ဖြစ်သူမှ .......
ဖခင်။ ။ငါ့သား......မင်းအရက်သောက်တာကြာပီကွ။ကြာရင်မင်းကျန်းမာရေး ထိခိုက်တော့မယ်။ ဒီတော့ မင်း ဒီအရက်ကိုဖြတ်နိုင်မလား။
ဖခင်၏ မှန်ကန်သော စကားကြောင့် သားဖြစ်သူမှာ ခေါင်းညိတ်ရမလို ။ ခေါင်း ခါရမလိုဖြစ်သွား၏။
ခဏမျှလည်း ဖခင်မျက်နှာကိုကြည့်ကာ ငိုင်သွား၏။ ပီးနောက် ဆုံးဖြတ်ချက်ချပီးဟန်ဖြင့် သားဖြစ်သူမှ.....ပြောလိုက်တာက....
သား။ ။အဖေ.....ကျနော်ယောက်ကျားပါဗျာ။ စိတ်ခိုင်ပါတယ်။ကျနော်အရက်ဖြတ်နိုင်ရင် ........
အဖေ ကျနော့်ကို ဘလက်လေဘယ်လ် တစ်လုံးဝယ်ပေးမလား...ကဲ...ပြော ...အဖေ.............တဲ့
« Reply #994 on: March 14, 2013, 07:34:53 AM »
ကျနော်အဲဒီနေ့ က....ရုံးမှာအလုပ်တွေများနေတာနဲ့ တော်တော်မိုးချုပ်မှ အိမ်ပြန်ရတယ်ဗျ။
အိမ်က မှာလိုက်တာလေးတွေ ၀ယ်ဖို့ကို ဘတ်စစ်ကားပေါ်က ဆင်းမှ သတိရတယ်ဗျို့။
ဒါနဲ့ ကျနော်လည်း ဘတ်စစ်ကားမှတ်တိုင်အနီးမှာရှိတဲ့ဆိုင်ပိတ်ကာနီး စူပါမတ်ကက်တခုထဲ ၀င်ပြီး လိုအပ်သမျှလေးတွေကို ရွေးပီး အမြန်ဝယ်လိုက်ပါတယ်။
၀ယ်စရာတွေစုံတော့ ကောင်တာမှာငွေသွားချေ။ ပြန်အမ်းငွေကိုတောင် မစစ်တော့ပဲ ဆိုက်ကားငှားပီး အိမ်ပြန်ဖို့ ခပ်သွက်သွက် လှမ်းခဲ့မိတယ်။
ဆိုက်ကား ဂိတ်ရောက်တော့ အကြွေ ပေးဖို့ ဆိုပီး အိပ်ကပ်ထဲ က ငွေကိုထုတ်လိုက်တဲ့အခါ ....
စူပါမတ်ကပ်မှ ပြန်အမ်းငွေ မှာ အမှတ်မထင် ရေတွက်ကြည့်ရာ မှားနေကြောင်းတွေ့လိုက်ရတယ်ဗျ။
ဒါနဲ့ စူပါမတ်ကပ် ကောင်တာ ကို အမြန်ပြန်ပြေးပီး အကျိုးအကြောင်းပြောလိုက်တယ်။
ကျနော်။ ။ဒီမှာခင်ဗျ။ ခုန က ညီမ ပြန်အမ်းလိုက်တဲ့ ငွေက မှားနေတယ်ဗျ။
ကောင်တာမှ စာရေးမ။ ။အို.........ခုမှလာပြောတာကတော့ ဘယ်ရတော့မှာလဲရှင့်။
အစ်ကို့အနေနဲ့ ကောင်တာကမထွက်မီ ငွေပြန်အမ်းချိန်ကတည်းက သေသေချာချာစစ်မှပေါ့။
ခုဆိုင်ကလည်းပိတ်ပီမို့.........ကျမအနေနဲ့ ဘာမှ တာဝန်ယူမပေးနိုင်ပါဖူး။ငွေစာရင်းအပ်လိုက်ပါပီ....
ကျေးဇူးပါအစ်ကို.....နောက်လည်းလာအားပေးပါ.နော်... ( ခေါင်းကိုညွှတ်ကာ ပြုံးလျက် ရိုသေစွာပြော၏ )
ကျနော်။ ။အင်းဗျာ.....ဆိုင်ကလည်းပိတ်ကာနီး။ ကျနော်ကလည်း အရေးကြီးနေလို့ မစစ်မိလိုက်တာပါ။ကျနော်ကိုက မှားတာပါဗျာ။
ခု ဆိုက်ကားဂိတ်ရောက်နေမှ ဒီကိုပြန်လာတာဗျ။
ဆိုက်ကားပေါ်တက်ကာနီး တော့ ညီမ ပြန် အမ်းလိုက်တဲ့ငွေက အတော်လေးကိုပိုနေလို့ပါဗျာ။
ကောင်တာမှ စာရေးမ။ ။အွတ်စ် ...........အမငေးးးးး....
« Reply #995 on: March 14, 2013, 07:35:38 AM »
စိတ္တဇ ဆေးရုံတစ်ခု ဟာလူနာတွေကိုလေယာဉ်နဲ့ တင်ဆောင်လာပြီးတော့ အခြားဆေးရုံတစ်ခုကို ပြောင်းပါတယ်။
အဲဒီမှာ လေယာဉ်ထဲ ကနေ အသံတွေကိုဆူညံနေအောင်ကြားရပါတယ်။
ဆရာဝန်က အရူးခေါင်းဆောင်ကိုဘဲလ် နှိပ်ပြီးလှမ်းခေါ်လိုက်တယ်။
အရူးခေါင်းဆောင်ထွက်သွားလေသည်။ ခဏနေ တော့ဘာသံမှ မကြားရတော့။
ဆရာဝန်သည်သဘောကျသွားသည်။ ဘဲလ် နှိပ်ပြီး အရူးခေါင်ဆောင်ကိုလှမ်းခေါ်လိုက်သည်။
"ဆရာဘဲ လေယာဉ်ပေါ်မှာဘောလုံးမကန်ရဘူးဆို…..အဲဒါနဲ့ ကျွှန်တော်လည်း လေယာဉ် တခါးပေါက်ကိုဖွင့်ပေးလိုက်တာ
အခုသူတို့ အကုန်အောက်ဆင်းပြီးဘောလုံးကန်နေကြပြီ "---
« Reply #996 on: March 14, 2013, 07:36:06 AM »
အောင်မောင်း က သရဲအရမ်းကြောက်တတ်သည် ။ ခက်တာက ခု သချိူင်္င်းအနားကို ဖြတ်မောင်းရမည် ။
သူ့ ခပ်သွက်သွက်လေး မောင်းလာ၏ ။
သိပ်မကြာ .. အပင်ကြီးတစ်ပင်အောက်မှာ မိန်းမ တစ်ယောက် ဆံပင်ဖားလျား အနက်ရောင်ဂါဝန်ကြီးနှင့်လက်တားနေတာတွေ.သည်။
သူ ကြောက်စိတ်က ၀ုန်းဆိုထသည်။ " ကားကြုံလေး လိုက်ပါရစေကွယ် "ဟု ငြင်ငြင်သာသာ ပြော၏။
ကူညီမည်ဟုတွေးမိပီး သူမအားအထဲကိုပထမ.. ထိုင်ခိုင်းပြီးမှ ကြောက်စိတ်ကြောင့် ပြန်နှင်ထုတ်ပစ်လိုက်သည် ။ပြီး မောင်းထွက်လာ၏။
" ဟူး တော်ပါသေးရဲ့ " ဟု သက်ပြင်းချကာစ ရှိသေးအနောက်မှာ ပြေးလိုက်လာတာတွေ.သည်။
ဆံပင်ဖားလျားကြီးမှာလဲ ကြောက်မက်ဖွယ် ဖွာလျက် ၊အသံနက်ကြီးဖြင့် ပါးစပ်ကလဲ ပလုံးပထွေးအော်လာသည် ။
ကျော့ထဲစိမ့်သွား၏ ။သူ သရဲခြောက်ခံရပြီဟုတွေးရင်းလီဗာကိုမြှင့်သည် ။ မရပါ....ထပ်ချပ်မကွာ....
သူမ.. ကလဲ ဇွဲကောင်းစွာ လိုက်လာဆဲ ။ အောင်မောင်းတစ်ယောက် အရမ်းထိတ်လန့်နေပြီ ။
နောက်ဆုံး ရဲစိတ်တင်ပြီးကားကိုရပ်လိုက်သည် ။
မျက်လုံးစုံမှိတ်ကာ ကြောက်လန့်စွာဖြင့်သရဲမအား မေးလိုက်သည် ။
" ခင်ဗျား ဘာလို့......ကျူပ်နောက်ကို လိုက်နေတာလဲဗျ ? "
သရဲမ.. မှ.... မောဟိုက်စွာနှင့် ပြန်ဖြေသည် ။
" ဟဲ့ သေနာရဲ့ ငါ့ဂါဝန်နဲ့ နင့်ကားနဲ့ ညိနေတာကိုးဟဲ့ "...တဲ့
« Reply #997 on: March 14, 2013, 11:43:02 AM »
လူကြီးလူကောင်းတစ်ဦး ရောက်ရှိလာပြီးစုံစမ်းလေ၏ ။
မှတ်ပြီလား Made in Japan
အမေရိကန်သို့ ခပ်ကြွားကြွား ဂျပန်တစ်ယောက် အလည်အပတ် ရောက်ရှိ နေ၏။ ပြန်မည့်နေ့တွင်
လေဆိပ်ဆင်းရန် တက္ကစီတစ်စင်း ငှား၏။
တက္ကစီဖြင့် လေဆိပ်ကို လာစဉ် လမ်း၌ အရှိန်ပြင်းပြင်း မောင်းလာသော ဟွန်ဒါကားတစ်စင်းက ၄င်းတို့တက္ကစီကို
ကျော်တက်သွားရာ ဂျပန်က ကားအပြင် ခေါင်းထွက်၍ လက်သီးလက်မောင်း တန်းကာ ဟစ်ကြွေး လိုက်သည်။
“ဟွန်ဒါကားကွ။ အရမ်းမြန်တယ်။ Made in Japan ကွ”
တိုယိုတာ တစ်စီးက ကျော်တက်သွားပြန်ရာ ကိုရွှေဂျပန်က အထက်ပါအတိုင်း
“တိုယိုတာကားကွ။ အရမ်းမြန်တယ်။ Made in Japan ကွ” ဟု ထအော်ပြန်ရာ ကားသမား အမေရိကန် အမြင်ကပ်စ ပြုလာသည်။
မစ်ဆူဘီရှီ ကားတစ်စင်း ကျော်တက်သွားပြန်သော အခါတွင်လည်း
“မစ်ဆူဘီရှီကားကွ။ အရမ်းမြန်တယ်။ Made in Japan ကွ” ဟု ထကြွားပြန်ရာ ကားသမား အမေရိကန်
သူ့ကို အတော်လေး ပေါက်နေပြီ ဖြစ်သည်။ သို့သော် စိတ်ကို ထိန်း၍ ဘာမှတော့ မပြော။
လေဆိပ်သို့ ရောက်သော အခါ ကားခ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၀၀ ကျသင့်ကြောင်း
ဒရိုင်ဘာက တောင်းလေရာ ဂျပန် မျက်လုံး ပြူးသွား၏။
« Reply #998 on: March 16, 2013, 08:23:51 AM »
"ဘာ!!!!...ရေ.........ဟုတ်လား.... ?.ဘာလုပ်ဖို့လဲဟင် ဘာလုပ်ဖို့လဲ"
Pages: « 1234567 8910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 | Go Up